अन्ततः रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो, हेर्नुहोस खोपको नेपाली मूल्य सहित ! – Life Nepali
अन्ततः रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो, हेर्नुहोस खोपको नेपाली मूल्य सहित !
कोरोना भाइरसविरुद्धको २ करोड ५० लाख डोज खोप नेपाल ल्याइँदै छ । रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच खोप नेपालमा भित्र्याउने सम्झौता भएको हो । नेपालमा ल्याइने भनिएको ‘स्पुतनिक–५’ भ्याक्सिन ‘ह्युमन एडेनो भाइरल भेक्टर्स प्लेटफर्म’ मा आधारित छ । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous Breaking – लाखौं पुगेको सुनको मुल्य, आज सोच्नै नसकिने गरि घट्यो !
Next प्रधानमन्त्री ओली ज्यू,: युवराज खतिवडामा के छ ? कुलमान घिसिङमा के छैन ?